သိန်း(၁၀၀)ကျော်တန်ဖိုးရှိ စိန်စီထားတဲ့ နာရီကို ချစ်သူလေးကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ် ဝေဖန်ပြောဆိုကြသူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက် – Suehninsi
သိန်း(၁၀၀)ကျော်တန်ဖိုးရှိ စိန်စီထားတဲ့ နာရီကို ချစ်သူလေးကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ် ဝေဖန်ပြောဆိုကြသူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက်
Sue | November 5, 2020 | ရသစုံ | No Comments
ဇေရဲထက်ဟာ လက်ရှိမှာတော့ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ လယ်ဝေးမြို့အတွက် ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဘဝအခြေအနေတွေကို ပြောပြခဲ့တာဟာ ပရိသတ်တွေ သင်ခန်းစာရစေချင်လို့၊ ဗဟုသုတ ရစေချင်တဲ့ ဆန္ဒ
ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။ ဇေရဲထက်ကို ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေ စတင်သိရှိခဲ့တာပါ။ ရုပ်ရှင်ချောမောလွန်းတာကြောင့် လူကြီးလူငယ် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုများစွာ
ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး TV ကြော်ငြာတွေလည်း အဆက်မပြတ်ရိုက်ကူးခဲ့ရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ ဟန်ဆောင်မှုမရှိပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုတတ်သူ
ဇေရဲထက်ကတော့ ချစ်သူကို သိန်းရာကျော်တန် စိန်စီထားတဲ့ လက်ပတ်နာရီ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အပေါ် ဝေဖန်နေကြတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်လာခဲ့တာပါေ ဇရဲထက်က. “ကိုယ်တွေကတော့
ဒဲ့ပဲ စိတ်မပါရင် သိန်းသောင်းချီလာပေးတောင် စိတ်မဝင်စားဘူး ကိုယ်လည်း ကြည်ဖြူရင် နောက်လှည့်မကြည့်ဘူး နောင်တလည်းမရဘူး တတ်နိုင်သလောက်ပေးမယ် ပြတ်သွားလည်း ချစ်လို့ပေးခဲ့တာလေ အမှတ်တရရှိစေချင်လို့ သူဘာလုပ်လုပ် မကျေနပ်လို့ လွှင့်ပြစ်လည်း
ကိုယ့်အလုပ်မဟုတ် ထွေးပြီးသားတွံတွေးတော့ ပြန်မငုံတတ်ဘူး” လို့ တုံ့ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇေရဲထက်ကတော့ သူ့ချစ်သူကို လက်ဆောင်ပေးတဲ့အပေါ် ဝေဖန်နေကြသူတွေကို ပြင်းထန်စွာတုံ့ပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
ဇရေဲထကျဟာ လကျရှိမှာတော့ အောငျမွငျတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈလာတဲ့အတှကျ သူ့ရဲ့ မှေးရပျဇာတိမွဖွေဈတဲ့ လယျဝေးမွို့အတှကျ ဂုဏျဆောငျနိုငျခဲ့ပွီလို့ ဆိုပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ဘဝအခွအေနတှေကေို ပွောပွခဲ့တာဟာ ပရိသတျတှေ သငျခနျးစာရစခေငျြလို့၊ ဗဟုသုတ ရစခေငျြတဲ့ ဆန်ဒ
ကွောငျ့ဖွဈတယျလို့လညျး သူက ပွောပါတယျ။ ဇရေဲထကျကို ဗီဒီယို ဇာတျကားတှကေနတေဆငျ့ ပရိသတျတှေ စတငျသိရှိခဲ့တာပါ။ ရုပျရှငျခြောမောလှနျးတာကွောငျ့ လူကွီးလူငယျ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုမြားစှာ
ရရှိခဲ့တာဖွဈပွီး TV ကွျောငွာတှလေညျး အဆကျမပွတျရိုကျကူးခဲ့ရတာကို တှရေ့ပါတယျ။ အခုခြိနျမှာတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတျအခိုငျအမာနဲ့ရပျတညျနတေဲ့ သရုပျဆောငျ တဈယောကျဖွဈလို့နပေါပွီ။ ဟနျဆောငျမှုမရှိပဲ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောဆိုတတျသူ
ဇရေဲထကျကတော့ ခဈြသူကို သိနျးရာကြျောတနျ စိနျစီထားတဲ့ လကျပတျနာရီ လကျဆောငျပေးတဲ့ အပျေါ ဝဖေနျနကွေတာနဲ့ပတျသတျပွီး ပွငျးပွငျးထနျထနျတုံ့ပွနျလာခဲ့တာပါေ ဇရဲထကျက. “ကိုယျတှကေတော့
ဒဲ့ပဲ စိတျမပါရငျ သိနျးသောငျးခြီလာပေးတောငျ စိတျမဝငျစားဘူး ကိုယျလညျး ကွညျဖွူရငျ နောကျလှညျ့မကွညျ့ဘူး နောငျတလညျးမရဘူး တတျနိုငျသလောကျပေးမယျ ပွတျသှားလညျး ခဈြလို့ပေးခဲ့တာလေ အမှတျတရရှိစခေငျြလို့ သူဘာလုပျလုပျ မကနြေပျလို့ လှငျ့ပွဈလညျး
ကိုယျ့အလုပျမဟုတျ ထှေးပွီးသားတှံတှေးတော့ ပွနျမငုံတတျဘူး” လို့ တုံ့ပွနျလာခဲ့တာဖွဈပါတယျဇရေဲထကျကတော့ သူ့ခဈြသူကို လကျဆောငျပေးတဲ့အပျေါ ဝဖေနျနကွေသူတှကေို ပွငျးထနျစှာတုံ့ပွနျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော အဆုံးထိဖတျရှုပေးကွတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျနျော
Source : SY Myanmar
ရှေးကတော့ မိုးသောက် မြန်မြန်သတိရဖို့ နေကြာပန်းခင်းထဲ ခေါ်သွားနေပြီဆိုတဲ့ ခန့်
ကားရေသွားဆေးတာ ပိုက်ဆံအိတ်မေ့ကျန်ခဲ့လို့ တိုင်ပတ်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ခြူးလေး